Soosaarayaasha Dharka Dharka dhaadheer-ee Shiinaha - Shirkadaha Dhoofiyaha Dhoola-dhaadheer iyo Warshad
Dharka dharka toosan ee dharka sare ee dharka sare ee dharka lagu qurxiyo ee dharka lagu qurxiyo ee dharka lagu xirto ee loo yaqaan 'Polreyster'.
Nooca CHECKEDOUT Shayga Caynka CM1102Z059000T4 Cabbirka S-3XL ereyada furaha ah ee dharka iska leh, lebiska soo-dhoweynta, shaati gacmeedka kala-goyska ah, shaashadda waardiyaha Mashiinka 60/40 poly / suufka GSM 143g Dharka tolida pollenster-ka ayaa sidoo kale loo yaqaan dunta xoogga-sareeya. Badanaa waxaa loo yaqaanaa (bead light). Kaas oo ah mid u adkeysi badan, jajaban hoose, iyo deganaansho kiimikaad oo wanaagsan. Sababtoo ah itaalkeeda sare, iska caabin fiican, ciriiriga hooseeya, hygroscopicity wanaagsan iyo iska caabbinta kuleylka, yari polyester waa iska caabinta-iska caabbinta ...
Dharka dharka toosan ee dharka sare ee Polyester Dharka toosan ee Dharka Dharka ah ee loo yaqaan 'Shirt CW1056C155000H
Nooca CHECKEDOUT Shayga COD Code CW1056C155000H Cabbirka S-3XL Erayada furaha dharka, dharka isboortiga, shaatiga gacmo dhaadheer, shaati gacmeedka dharka 100% POLY Sewing string Polyester thread waxaa sidoo kale loo yaqaannaa thread xoog-sareeya. Badanaa waxaa loo yaqaanaa (bead light). Kaas oo ah mid u adkeysi badan, jajaban hoose, iyo deganaansho kiimikaad oo wanaagsan. Sababtoo ah itaalkeeda sare, iska caabin fiican, ciribtir hooseeya, hygroscopicity wanaagsan iyo iska caabin kulul, polyester yarn waa iska caabinta jirka, adkeysi ...
Dharka dharka cad ee dharka sare ee dharka sare ee dharka lagu qurxiyo ee dharka lagu qurxiyo ee dharka lagu xirto ee dharka lagu xirto ee CW1102Z059000T4
Nooca CHECKEDOUT Shayga COD Code CW1102Z059000T4 Cabbirka S-3XL Erayada furaha dharka, dharka isboortiga, shaati gacmo dhejis ah, dharka gogoshaha ah Dharka 60/40 poly / suufka GSM 143g Dharka tolida pollenster-ka ayaa sidoo kale loo yaqaan dunta xoogga sare. Badanaa waxaa loo yaqaanaa (bead light). Kaas oo ah mid u adkeysi badan, jajaban hoose, iyo deganaansho kiimikaad oo wanaagsan. Sababtoo ah itaalkeeda sare, iska caabin fiican, ciriiriga hooseeya, hygroscopicity wanaagsan iyo iska caabin kuleylka, polyester yarn waa corrosion-re ...
Dharka dharka sare ee dharka sare ee dharka sare ee Polyester Dharka toosan ee Dharka Dharka ah ee Caanka ah CW1102Z104000T4
Nooca CHECKEDOUT Shayga COD Code CW1102Z104000T4 Cabbirka S-3XL Erayada furaha dharka, dharka isboortiga, shaati gacmo dhejis ah, dharka gogoshaha ah Dharka 60/40 poly / suufka GSM 143g Dharka tolida pollenster-ka ayaa sidoo kale loo yaqaan dunta xoogga sare. Badanaa waxaa loo yaqaanaa (bead light). Kaas oo ah mid u adkeysi badan, jajaban hoose, iyo deganaansho kiimikaad oo wanaagsan. Sababtoo ah itaalkeeda sare, iska caabin fiican, ciribtir hooseeya, hygroscopicity wanaagsan iyo iska caabin kuleylka, polyester yarn waa corrosion-r ...
Cudurka Cudurka Dhegaanta ee Cilmiga Poliska ee Class Class Long Long Sleeve Dharka dharka CU1115C126000T6
Nooca CHECKEDOUT Shayga COD Code CU1115C126000T6 Cabbirka S-3XL ereyada furaha dharka, dharka isboortiga, shaati gacmo dhaadheer leh 100% suuf Xinjiang Aksu dhaadheer oo dhaadheer ah, aan biin-lahayn, aan-ruxin, lahayn cudurka kansarka, nolosha adeegga ayaa 2 jeer ah qafiska joogtada ah jaakad. Dunta tolida polyester-ka ayaa sidoo kale loo yaqaan 'thread thread xoog-sare'. Badanaa waxaa loo yaqaanaa (bead light). Kaas oo ah mid u adkeysi badan, jajaban hoose, iyo deganaansho kiimikaad oo wanaagsan. Awooddeeda sare awgeed, soo afjarid wanaagsan ...
Dharka dharka toosan ee dharka sare ee Polyester Dharka toosan ee Dharka Dharka ah ee Cilmiga CW1056C154000H
Nooca CHECKEDOUT Shayga COD Code CW1056C154000H Cabbirka S-3XL Erayada furaha dharka, dharka isboortiga, shaatiga gacmo dhaadheer, shaati gacmeedka dharka 100% POLY Sewing string Polyester thread waxaa sidoo kale loo yaqaannaa dunta adag. Badanaa waxaa loo yaqaanaa (bead light). Kaas oo ah mid u adkeysi badan, jajaban hoose, iyo deganaansho kiimikaad oo wanaagsan. Sababtoo ah itaalkeeda sare, iska caabin fiican, ciribtir hooseeya, hygroscopicity wanaagsan iyo iska caabin kulul, polyester yarn waa iska caabinta jirka, adkeysi ...
Dharka dharka toosan ee dharka sare ee Polyester Dharka toosan ee Dharka Dharka ah ee loo yaqaan 'Shirt CW167C0181E'
Nooca CHECKEDOUT Shayga COD Code CW167C0181E Cabbirka S-3XL Erayada furaha dharka, dharka isboortiga, shaati gacmo dhaadheer leh Dhar 65/35 poly / suuf GSM.146g Xinjiang Aksu suuf dhaadheer oo dhaadheer, bilaa biya-shubis ah, is-ruxin, carcinogens, nolosha adeega 2 jeer waa jaakad qafiif ah oo caadi ah. Dunta tolida polyester-ka ayaa sidoo kale loo yaqaan 'thread thread xoog-sare'. Badanaa waxaa loo yaqaanaa (bead light). Kaas oo ah mid u adkeysi badan, jajaban hoose, iyo deganaansho kiimikaad oo wanaagsan. Awooddeeda sare awgeed, Abra wanaagsan ...
Dharka dharka toosan ee Dharka toosan ee Dharka Dhegaanta leh ee Wayn RED CW167C0401E
Nooca CHECKEDOUT Shayga COD Code CW167C0401E Cabbirka S-3XL ereyada muhiimka ah dharka labiska, dharka isboortiga, shaati gacmo dhaadheer leh Dhar 65/35 poly / suuf GSM.146g Xinjiang Aksu suuf dhaadheer oo dhaadheer, bilaa biya-shubis ah, is-ruxin, lahayn kansar, nolosha adeega 2 jeer waa jaakad qafiif ah oo caadi ah. Dunta tolida polyester-ka ayaa sidoo kale loo yaqaan 'thread thread xoog-sare'. Badanaa waxaa loo yaqaanaa (bead light). Kaas oo ah mid u adkeysi badan, jajaban hoose, iyo deganaansho kiimikaad oo wanaagsan. Awooddeeda sare awgeed, abras wanaagsan ...
BLACK Polyester Cotton Classic Long Sleeve Slim Fit dharka dharka lebisiga ah ee loo yaqaan 'Shirt CW181C0100E'
Nooca CHECKEDOUT Shayga COD Code CW181C0100E Cabbirka S-3XL Erayada furaha dharka, dharka isboortiga, shaati gacmo dhaadheer leh Dhar 65/35 poly / suuf GSM.146g Xinjiang Aksu suuf dhaadheer oo dhaadheer, bilaa shuruud ah, aan xishood lahayn, kansar la'aan, nolosha adeega 2 jeer waa jaakad qafiif ah oo caadi ah. Dunta tolida polyester-ka ayaa sidoo kale loo yaqaan 'thread thread xoog-sare'. Badanaa waxaa loo yaqaanaa (bead light). Kaas oo ah mid u adkeysi badan, jajaban hoose, iyo deganaansho kiimikaad oo wanaagsan. Awooddeeda sare awgeed, abras wanaagsan ...